Udilikajele kowabulala u-anti emsola ngokuthakatha | News24
Udilikajele kowabulala u-anti emsola ngokuthakatha
Limpopo – Owesilisa owabulala u-anti wakhe ngoba emsola ngokuthakatha uyise ugwetshwe udilikajele yiNkantolo eNkulu eThohoyandou ngoLwesine ngoLwesine, kusho iNational Prosecuting Authority (NPA).
Esitatimendeni esikhishwe ngoLwesihlanu, okhulumela i-NPA eLimpopo, uMashudu Malabi-Dzhangi, uthe u-Isando Rivimbi, 32, walahlwa yicala lokubulala nelokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho nokwenze wanikezwa neminye iminyaka emithathu ngaphezu kwesigwebo sikadilikajele.
Isigwebo uzosidonsa kanye kanye.
Inkantolo yatshelwa ukutho ngomhlaka 9 Julayi 2016, eHlanganani eRotterdam village, uRivimbi nomngani wakhe bakha itulo lokubulala u-anti oneminyaka engu-89 ubudala bemsola ngokugulisa uyise ngokumthakatha.
OLUNYE UDABA: Iphoyisa lizibulele ngemuva kokubulala unkosikazi
UMalabi-Dzhangi uthe abesilisa ababili baya emzini kamufi, bamcela ukuba abaphelezele bayobona ubaba kaRivimbi ogulayo.
"Kuthe befika khona, bamyisa egunjini elithile nokuyilapho abasolwa bambamba khona izindla, bamnquma uqhoqhoqho. Isidumbu sakhe basifaka ebhaleni, bayosilahla emathuneni,” kusho uMalabi-Dzhangi.
Isidumbu satholakala ngakusasa ekuseni ngemuva kokuba umakhelwane etshele amalungu omphakathi ukuthi ubone ezolandwa ngabesilisa ababili.
URivimbi wabanjwa wanikelwa emaphoyiseni, kodwa umngani wakhe yena wabulawa umphakathi.